အန်ဖီးလ် ကွင်းမှာ ဘယ်သူ နိုင်မလဲ . . . EPL Week 12 အတွက် ချာလီ နီကိုလပ်စ် ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
ပရီးမီးယားလိဂ် ကတော့ ပွဲစဉ် ၁၂ မှာ အကျိတ် အနယ် အရှိ ဆုံး ပွဲစဉ် နဲ့ အတူ စောင့်ကြို လို့ နေပါပြီ ။ အဆင့် ၁ နေရာက လီဗာပူး …
ဘိုင္ယန္ နည္းျပရာထူးအတြက္ တရားဝင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးေတာ့မယ့္ အာဆင္ဝင္းဂါး နဲ႔ နံနက္ခင္း သတင္းမ်ား
• အာဆင္ဝင္းဂါး ကိုယ္တိုင္က လစ္လပ္ေနတဲ့ ဘိုင္ယန္ ျမဴးနစ္ ရာထူးကို ရယူဖို႔ အတြက္ အမူေဆာင္ခ်ဳပ္ ႐ူမင္နစ္ နဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ လာမယ့္ အပတ္ထဲမွာ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဆင္နယ္ …
ဘာစီလိုနာ က မက်ဆီ ရဲ့ နေအိမ် ပေါ်ကနေ လေယာဉ်တွေ ဖြတ်ကျော်ပြီး ပျံသန်းခွင့် မရှိဘူး ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ မနှစ် ကတည်းက ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ကမ္ဘာကျော် ဘေားလုံးသမား တစ်ယောက် …
ဒီတစ်ပတ် ရဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲ ဖြစ်သလို ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကလဲ စိတ်ဝင် တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်ကြမယ့် လီဗာပူး နဲ့ မန်စီးတီး တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ ပွဲစဉ်ဟာ လာမယ့် တနင်္ဂနွေ့ညမှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ …
တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ ကစားသွားဖို့ ရှိနေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် မှာ မန်စီးတီးအသင်းကို အနိုင်ရခဲ့ရင်လည်း ချန်ပီယံ ဆုအတွက် ပြောဖိုု့က စောနေသေးတယ်လို့ လီဗာပူး တိုက်စစ် ကစားသမား ဆာလတ်က ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်သင်းဟာ အခုရာသီမှာလည်း ယမန်နှစ်ကလို …
အခုအပတ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၂ ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပွဲစဉ်အဖြစ် တော့အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်နေတဲ့ လီဗာပူး အသင်းနဲ့ လက်ရှိ ချန်ပီယံ မန်စီးတီး အသင်းတို့ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အန်ဖီးလ်မှာ ကစားရမယ့် အခုပွဲစဉ်ကိုသာလီဗာပူးတို့ အနိုင်ရခဲ့ပါက …
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ မန်နေဂျာ ဖရန့် လမ်းပတ် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ အတွက် တလတာ အကောင်းဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် မန်နေဂျာ ဆု ကို ဒီဆု အတွက် အခြား ဆန်ခါတင် …
စီးတီး အတွက် သတင်းဆိုး ၊ လီဗာပူး အတွက် သတင်းကောင်းတွေ နဲ့ . . . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
မန်ချက်စတာ စီးတီး အသင်း ဂိုး သမား အီဒါဆင် ဟာ လီဗာပူး နဲ့ ကစားမယ့် ပွဲ ကို လွဲချော် မယ် လို့ နည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ က အတည်ပြု ပေးလိုက် …
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ယမန်နေ့ ညက ယူရိုပါ လိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ် အဖြစ် ပါတီဇန် ဘဲဂရိတ် အသင်း နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ခဲ့ပြီး ၃ …
Page 1 … Page 200 Page 201 Page 202 … Page 229